Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra! – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 août 24, 2012 Laisser un commentaire sur Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra!
Ny sofintsika afaka mamantatra feo: mety feo mahafinaritra, mety feo mankadilo koa, ary misy aza feo izay tsy mba ren’ny sofin’olombelona akory toa ny « ultra son » ohatra. Ny masontsika dia mahita ny lokombonikazo kanto dia kanto ery, ny endriky ny faravodilanitra mamelona ny heritreritra ny amin’ny fahatsaran’ny asan’Andria-manitra nefa ao koa ireo zavatra mahatsiravina mampiorinkoditra antsika! Voafetra ihany ihany anefa ny zavatra azon’ny masontsika jerena fa tsy mahita amin’ny maizina isika!
« Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra » Ikor 2:9
Ny Fanahy kosa dia mamantatra ny zavamiafina , na dia ny any ampo tsy milaoka aza!
Izy no mampiaiky antsika ny fahotantsika!
Izy no mitaridalana ny zanak’Andriamanitra! « Izay tarin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra » rehefa mandray ny Zanak’Andriamanitra isika dia omeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, ary tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra.
Ny famantarana ny zavatra rehetra ho an’ny zanak’Andriamanitra dia manampy azy amin’ny fahalavorariana ny diany. Koa raha mandehe amin’ny lalana sarotra tsy fantatra dia ny Fanahy manampy azy .Ny Fanahy koa anefa dia mahatsiaro malahelo, rehefa manao izay tsy tiany ny zanak’Andriamanitra. Koa aoka ny zanak’Andriamanitra hazoto hanontany ny Fanahy ao anatiny arey hankato izay lazainy!
« NyFanahy mamantatra ny zavatra rehetra » ka ho mpitaridàlana , sy ho mpampianatra, sy ho mpananatra…
Ny Tompo Jesosy Kristy hampahery antsika!
Publié parfilazantsaramada août 24, 2012 Publié dansUncategorized
Tiava: Didy Vaovao